I-Star Wars: I-trailer yase-Old Republic izokushiya ungakhulumi | Izindaba zamagajethi
I-Star Wars: I-trailer yase-Old Republic izokushaya ingqondo
UMiguel Hernandez | | Ikhaya, Imidlalo yevidiyo
Ama-Videogames muva nje aba njengemboni emnandi (noma ngaphezulu) njenge-cinema. Ama-blockbusters aya ngokuya efaneleka ngokwengeziwe, futhi ezimweni eziningi adlula ezinye izinhlobo zokuzijabulisa ezinolwazi oluningi ekutshalweni nasekuqoqweni. Namuhla sikulethela i-trailer ye I-Star Wars: i-Old Republic nokwandiswa kwalo Abahlonishwa besihlalo sobukhosi saphakade. Umbukiso wobuciko wemizuzu eyisithupha kuphela ezokukhuthaza ukuthi uyibambe futhi lokho kuthola izibuyekezo ezinhle kakhulu ezivela kubathandi be-saga ye-Star Wars emhlabeni wonke, kanye, sonke siyavuma.
Ukuthunyelwa kwezobuchwepheshe ngaphandle kokulingana, iqiniso ukuthi iThe Force ikhona kakhulu kulesi sitolimende. Kodwa-ke, azikho izigaba zakudala ezimbalwa ezikhetha ukubukela phansi i-intrahistory kanye neskripthi umdlalo wevidiyo ongahle ube naso. Iqiniso lihluke kakhulu, empeleni, ingxenye enkulu yomphakathi ikhalela uchungechunge noma, okungcono kakhulu, ibhayisikobho ezovela kulolu hlobo. Iqiniso ukuthi i-trailer ijabulisa iningi labalandeli balesi saga, futhi ikakhulu kulabo abazazi mathupha Izimpi Zenkanyezi: AmaKnights esihlalo sobukhosi saphakade ngakho-ke ngeke banqikaze ukulanda lokhu kunwetshwa.
Le vidiyo manje isondele ekubukweni kwezigidi ezimbili, futhi inokuthandwa okungaphezu kuka-30.000, kunabangu-517 kuphela abangathembekile abangaboni kufanelekile ukushiya isithupha sabo ku-YouTube. Nakulokhu futhi, i-Electronic Arts neBioware bayithatha ngokungathi sína iSaga Yezinkanyezi. Kulokhu, kufanele sikhethe uhlangothi olumnyama noma olukhanyayo lwamandla okulandela indaba ngokuya ngokuthanda kwethu. Ngakolunye uhlangothi, abadlali abakhokha okubhaliselwe kwanyanga zonke bazothola lesi sibuyekezo mahhala ngokuphelele.
Ngabe uzoyikhumbula? Uma ungumthandi wesaga siyakungabaza. Sishiye ebhokisini lokuphawula okuvelayo mayelana nombukiso wezobuchwepheshe owenziwe kule trailer yemizuzu engu-6.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » I-Star Wars: I-trailer yase-Old Republic izokushaya ingqondo
AbakwaSamsung bayeke ukungena ngaphezu kwezigidi eziyi-17.000 ngemuva kokuhoxisa i-Galaxy Note 7
UTesla ufuna abasebenzi eSpain, egxile ekufuneni eBarcelona naseMadrid